I-Viralheat: Ukuqapha Komphakathi Kwama-SMBs | Martech Zone
NgeSonto, uJanuwari 1, 2012 NgoLwesithathu, Februwari 10, 2016 Douglas Karr
Sekunesikhathi sibhekile ukuthola insiza yokuqapha imithombo yezokuxhumana. Uhlelo lokuqapha ezokuxhum lukuvumela ukuthi usethe ama-brand namagama asemqoka futhi ubheke amasayithi ahlukahlukene wezokuxhumana ukuze ushiwo, imizwa nomsebenzi owenziwa ngakuleyo mibono. Izinkampani, isu lokuqapha ezokuxhumana nabantu lingaba nenzuzo enkulu ekuphatheni izingqinamba zesevisi yamakhasimende, ukuqapha indlela abantu abazizwa ngayo ngomkhiqizo wakho, nokubona ukuthi amasu akho omphakathi asebenza kahle kangakanani.
Okukhishwayo izindleko ezingakholeki zalezi zinhlelo! Ukwenza ukubuya kucebo lezokuxhumana kuthatha isikhathi, ngakho-ke ukukhuluma neklayenti ukuthi lingeze ipulatifomu eyizinkulungwane zamaRandi ngenyanga kuyinto eyeqisayo. Ngibuze lo mbuzo kwabanye abathengisi bezokuxhumana, "Ngabe ikhona inkundla engabizi yokuqapha imithombo yezokuxhumana laphaya?" futhi angitholanga izimpendulo eziningi kakhulu.
Kodwa-ke, impendulo eyodwa kusuka ku- UCarri Bugbee kungijabulise kakhulu. I-Viralheat kubonakala njengokuqapha okuqinile kwezokuxhumana nabantu futhi analytics ipulatifomu eyakhelwe imakethe yamabhizinisi amancane naphakathi nendawo (SMB).
Ngijabule ukuqala ukusebenzisa I-Viralheat ukuqala ukuqapha ukutholakala kwamakhasimende ethu kwezokuxhumana. Uhlelo lubonakala luqinile ngezici eziningi ezibalwe:
Ukuqashwa kwesikhathi sangempela - lesi yisici esiyinhloko. Amanye amasistimu amaningi awasona isikhathi sangempela, ahlanganisa kuphela idatha evela kwamanye amasistimu.
Ama-Influencer analytics ukukhomba abalandeli abanethonya elikhulu elingathinta imikhankaso.
Ukuhlaziywa kwemizwa ukukhomba isimo sokushiwo ngakunye.
Ukuhlaziywa kwegciwane ukukhomba ama-tweets nokushiwo okunamandla egciwane.
Ukuqashwa kwevidiyo kumasayithi wamavidiyo angaphezu kwama-200.
Ukuhlanganiswa kweCRM ukusunduza kuholela ku-Salesforce noma ukulanda nge-Excel.
Indawo ye-Geo amandla wokukhawulela amaphrofayili akho nganoma iyiphi indawo emhlabeni.
Izexwayiso seDynamic amandla ukuze ukwazi ukuthola izaziso ezisheshayo ngokushiwo.
API - ukuze ukwazi ukuhlanganisa idatha nanoma yiluphi uhlelo lwangaphandle ongaluthanda.
Ngaphandle kwezici, isici esihlaba umxhwele kakhulu se- I-Viralheat kungaba yintengo. Iphakethe labo lokuvula lingu- $ 9.99 ngenyanga ngezici eziyisisekelo. Iphakethe le- $ 29.99 ngenyanga libonakala linakho konke ibhizinisi elincane elikudingayo ukuze liqale. Iphakethe le- $ 89.99 ngenyanga lifaka iphakethe le-ejensi enophawu!
Ngamanani, lokhu kungaba elinye lamaphakeji wokuqapha ezokuxhum aqinile engiwatholile. Uma wazi amapulatifomu amaningi wokuqapha imidiya yezenhlalo ama-SMB laphaya (hhayi ukushicilela imithombo yezokuxhumana), sazise emazwaneni. Futhi - uma ungumsebenzisi we I-Viralheat, singathanda ukuzwa imicabango yakho ohlelweni. Sijabule kakhulu ukuthi sibhalisele iphakheji yokuxhumana (futhi lezo izixhumanisi kulokhu okuthunyelwe).
Tags: Ukuqapha indawo ye-geoukuqapha geosocializibalo ezithonyaukuhlaziywa kwemizwaukuhlanganiswa kwe-crm yomphakathisocial mediaizexwayiso zokuxhumana nabantuanalytics media socialukuqapha ezokuxhumukuqapha ividiyoukuhlaziywa kwegciwaneukushisa kwegciwane
Dec 10, 2012 ku-12: 55 AM
UDoug, ngaqhekeka lapho ngibona okuthunyelwe kwakho ngoba ngakuthola ngokucwaninga amathuluzi wokuqapha imithombo yezokuxhumana amaSMB. Ngabe sengibona igama lami kokuthunyelwe kwakho. Siyabonga ngokumemeza!
Ngihlale ngibheka amathuluzi amasha wokuqapha athengeka ama-Startups nama-SMB, kepha kubonakala sengathi i-Viralheat isengaba yindlela engcono kakhulu yemali. Uma ngihlangabezana nanoma yini efanayo, ngizongena ukuze nginazise.
Dec 10, 2012 ku-12: 58 AM
Sicela wenze, @CarriBugbee: disqus! Asikakatholi isivumelwano esingcono laphaya (sibonga wena!) - futhi iViralheat iyaqhubeka nokwenza ngcono ipulatifomu yabo.